काङ्ग्रेसको जितमा सबैको जित हुने ः शर्मा « Loktantrapost
काङ्ग्रेसको जितमा सबैको जित हुने ः शर्मा
६ मंसिर २०७४, बुधबार १८:०७
काँकरभिट्टा । नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेसको जित हुनु भनेको सबै क्षेत्रको जित हुने बताएका छन् ।
मंसिर २१ दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहेका शर्माले काङ्ग्रेसले सबैलाई समेटेर समृद्ध मुलुक निर्माण अभियानमा लागेको बताउँदै यसमा यो पाटी वा त्यो पाटी भन्दा पनि आम नेपालीको जित हुने स्पष्ट पारे ।
‘आज हामी गठबन्धनको नाममा विभाजित भएका छौँ’ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शर्माले भने–‘यो एक अर्कामा कित्ताकाट गरेर कहिलेसम्म विभाजित हुने ? के का लागि विभाजित हुने ? हामीसँग एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, राप्रपा तथा विभिन्न पार्टीको देश बनाउने आ आफ्नै भिजन छ । तर नेपालको भिजन किन हुन नसक्ने ? त्यसैले अबको १० वर्षमा देशको मुहार परिवर्तन हुने किसिमले सिङ्गो देशको भिजन बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।’
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका रविन कोइरालासँग ६ सय ८९ मतले पराजित भएका शर्माले राजनीतिमा असल संस्कारको विकास गर्नु पर्ने बताए । उनले आफ्नो पाटीलाई मात्र राम्रो देख्ने अनि अरुलाई सधैँ दुस्मन मान्ने प्रवृतिले नै देशले गति लिन नसकेको बताए ।
‘म हारेर पनि हराइन’ पार्टीका प्रखर बक्ता शर्माले भने–‘त्यसबेला मैले मतदातादालाई मेरो बारेमा बुझाउन सकिन,उहाँहरुको मन जित्न सकिन त्यसैले मत पनि जित्न सकिन । तर यस पटक मैले मन जितेको छु । सिंहदरवार पस्ने लाइसेन्स नपाए पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेर निरन्तर काम गर्ने अवसर पाए । कुनै न कुनै माध्यबाट यस क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्ने अवसर मिल्यो । त्यसैले पनि आम मतदाताले मलाई रुचाउनु भएको कुरा हरेक ठाउँमा पुग्दा महसुस गरेको छु । यसले पनि हाम्रो जित निश्चित छ ।’
२०७० सालमा पराजित भएपछि विजेता हुनु भएको एमालेका रबिन कोइरालालाई आफैँले फोन गरी बोलाएर बधाइ दिएको बताउँदै शर्माले भने–‘ उहाँको जितपछि मैले बधाई दिँदै माला लगाएर आएँ । मैले आफ्नो हारलाई सहजै स्वीकार गरे । मैले सधैँ भन्दै आएको छु कि राजनीतिमा सुधार हुनु पर्छ ।’
प्रदेश सभा क का उम्मेदवार केशवराज पाण्डेले अब देशलाई आर्थिक विकासतर्फ अगाडी बढाउनु पर्ने बताए ।
प्रदेश सभा ख का उम्मेदवार अशोककुमार पोखरेलले राजनीतिमा सुद्धता नभएसम्म देशले गति लिन नसक्ने बताए । उनले आफु सधैँ राजनीतिमा परिवर्तन हुनु पर्छ भन्दै आएकोले अबको एजेण्ड पनि राजनीतिक सुधार गर्दै सामाजिक विकासमा लाग्ने बताए ।
चुनाव नजिकिँदै गएपछि काङ्ग्रेसले चुनावी अभियानलाई तिव्रता दिएको हो । बुधवार क्षेत्र नम्बर १ अन्तरगत रहेको काँकरभिट्टा, धुलावारी, साविकको ज्यामिरगढी, भद्रपुर, शान्तिनगरलगायतका क्षेत्रमा घरदैलो अभियानका साथै कोणसभामा सहभागि भएका थिए ।